ဒါက သူ့ရဲ့တိုပူးနွေးပန်းကန် (မြေပဲဆံထောင်း မှုန့်မှုန့်ညှက်ညှက်)
ဒါက ကျွန်မရဲ့တိုပူးနွေးပန်းကန် (မြေပဲလှော်ကြီးကြီးနဲ့ ကြာညို့ထည့်ဖို့မေ့သွားလို့ :D)
၁၁။ ကြာညို့/ ပဲငံပြာရည်အပျစ်
၁၁။ ရှမ်းချဉ်(သို့) ဂေါ်ဖီချဉ်
တိုးပူးမုန့်တစ်ဆ ရေအေးအေး သုံးဆ ထည့်၊ ဆား၊ အချိုမုန့် နည်းနည်း ထည့်ပြီး ဖျော်ပေးပါ။ တိုပူးနွေးကျိုမည့် အိုးထဲသို့ ဖျော်ထားသောတိုပူးမုန့် ထည့်ပါ။ မီးနည်းနည်းနဲ့ ကျိုပေးပါ။ အဆက်မပြတ်မွေပေးပါ။ အိုးကပ်မှာစိုးလို့ အဆက်မပြတ်မွှေတာပါ။ ဆူပွက်လာရင် တိုပူးနွေးရပါပြီ။
စားမယ့် ပန်းကန်ထဲသို့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ပြုတ်ထည့်၊ တိုးပူးနွေးထည့်၊ ကြာညို့ထည့်၊ အသားအနှစ်ထည့်၊ မြေပဲဆံထောင်းထည့်၊ ဆီကျက်ထည့်၊ ကြက်သွန်မြိတ်ထည့် ၀က်ခေါက်နဲ့တွဲပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။ (ဒီနေ့တော့ ကြက်သွန်မြိတ်မရှိလို့ မထည့်လိုက်ရပါဘူး။)
(ဆား၊ အချိုမုန့်ကို လိုအပ်မှ ထည့်ပါ။ အသားအနှစ်နဲ့ တိုပူးနွေးထဲ ပါပြီးသားမို့ ငန်သွားမှာစိုးလို့ပါ။)
Posted by မိုးကောင်းသူ at 3:39 PM
ကျေးဇူးအမ-တို့ဖူးနွေးစားချင်နေတာ။ အခုမှပဲ နည်းသိတော့တယ်။ ဒီဘလော့ခ် အခုမှတွေ့မိတယ်။ အမြဲလာဖတ်မယ်နော်။
ကျေးဇူးပါ ညီမလေးရေ။ အစ်မလဲ ကိုယ်ချက်တတ်သလိုရေးထားတာပါ။
ချက်မစားတတ်ဘူး၊ တစ်နေ့ အားချိန်ရရင်တော့ ချက်စားကြည့်ဦးမယ်။ ကျေးဇူး။
ပထမပွဲပြင်ထားတာ ပိုသဘောကျတယ် အဲ့အတိုင်းကြိုက်တာ။ :P
မေးမလို့ - စောကောမှုန့် နဲ့ တိုပန်ကျန် ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ? ပြောပြပါလား။
ပထမပွဲက ကိုယ်တော့်ပန်းကန်။ အစ်မက ပန်းကန်က တိုပူးနွေးလျှော့ထည့်ထားတာ။
ညလေးက စောကောဆိုလို့ပြောပြပါမယ်။ အိမ်မှာတော့ စောကောလို့ခေါ်တာပဲ။ စောကောခေါ်လား စောင်းကောခေါ်လားမပြောတတ်ဘူး။ တရုတ်မဆာလို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်။ စောကောလုံးက ဇာရိတ်ဖိုသီး အလုံးလောက်ပဲ။ အိမ်မှာတော့ စောကောအလုံးကိုလှော်ပြီး ထောင်းထားတတ်တယ်။ ဒီမှာစောကောလုံးတွေ့ရင် အစ်မဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်နော်။ တိုပန်ကျန်(ခေါ်) တရုတ်ပဲငါးပိကိုတော့ အစ်မ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့စ်တင်ထားပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ တင်ထားပါတယ်။
smart brother said...
တို့ပူးနွေးကနေ စဖတ်ပြီ။ ကိုယ်ကြိုက်တာကနေ စဖတ်တယ်။
Would be really appreciate if you could tell me what is တိုးဖူးမုန့် in your တိုဖူးနွေးကျိုနည်း. Is it like chickpea flour? Thanks.